Rochak – Page 10 – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
यो संसारकै कान्छो देशबारे तपाईलाई थाहा छ ? यस्ताे छ प्रावधान
एजेन्सी । के तपाईलाई विश्वकै कान्छो देशबारे थाहा छ ? १३ अप्रिल २०१५ मा जन्मिएको यो देशको कुल क्षेत्रफल ७ वर्गकिलोमिटरमात्रै रहेको छ । लिबरल्याण्ड नाम दिइएको यो देशलाई अन्तराष्ट्रिय समर्थन प्राप्त नभएपनि यसको चर्चा भने संसारभर नै भएको छ । यो देश सर्बिया र क्रोएसियाबीचमा डेन्यूब नदीको पश्चिमी तटमा रहेको छ । यसलाई नमुना […]
Posted in: International News, mainNews, Rochak
आफ्नै श्रीमती बेच्नका लागि विज्ञापन !
एजेन्सी । हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा श्रीमान् श्रीमतीको सम्बन्ध एक पटकको लागि मात्रै नभएर सात जन्मसम्म पनि सँगै हुन्छ भन्ने मान्यता छ । तर, बेलायतमा एक पुरुषले आफ्नै पत्नीको लिलामीका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेका छन् । वेकफिल्ड योर्कशायरका ३३ वर्षीय साइमन ओकेनले आफ्नी २७ वर्षीय श्रीमती लिएन्ड्राको तस्बीर नै राखेर अनलाई लिलामी साइट ‘इबे’ मा विज्ञापन […]
Posted in: Rochak
जो बिल गेट्सलाई पछि पारेर दुई दिन बने विश्वकै धनी
एजेन्सी । फेसन किङ अमानसियो ओर्टेगा विश्वकै धनी व्यक्तिको सूचीमा दुई दिन पहिलो नम्बरमा आईपुगे । माइक्रोसफ्ट कम्पनीका संस्थापक बिल गेट्सलाई पछि पार्दै जारा कम्पनीका मालिक ओर्टेगा विश्वकै धनी व्यक्तिको सूचीको पहिलो नम्बरमा आइपुगेका हुन् । फोब्र्स पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार ओर्टेगासँग ७८ बिलियन डलर सम्पत्ति रहेको छ भने बिल गेट्ससँग ७७.४ बिलियन पाउण्ड […]
Posted in: Artha Jagat, International News, mainNews, RochakLeaveacomment
हरेक युवतीका चारजना पति, तपाई चौथो नम्बरमा !
एजेन्सी । सायद तपाईलाई यो कुरा केही असहज र अनौठो पनि लाग्न सक्छ, तर यो कुरा सतप्रतिशत साँचो हो । आफ्नी पत्नीको तपाई पहिलो नै श्रीमान् हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो भने तपाईमाथि पनि यही प्रश्न आउन सक्छ । अब तपाई सोच्नुहोला कि जब हामी पहिलो विवाह गर्दैछौं र मेरी पत्नीको पहिलो विवाह हुँदैछ भने म […]
Posted in: RochakLeaveacomment
के तपाईसँग यो क्षेत्रमा जाने हिम्मत छ ?
काठमाडौं । संसारमा धेरै कम मात्रै मानिसहरु डरलाग्दा स्थानमा जान मन पराउँछन् । चुनौती र खतरा मोल्नु धोरै मान्छेका लागि मात्रै चाहानाको विषय हुन्छ । कुनै स्थानको बारेमा नयाँ कुरा थाहा भयो भने मानिसहरु त्यसबारेमा जान्न इच्छुक हुन्छन्, तर चुनौती नै मोल्न भने हत्तपत्त तयार हुँदैनन् । के तपाईलाई भूत प्रेतजस्ता कुरामा विश्वास लाग्छ ? […]
Posted in: Rochak, TechnologyLeaveacomment
एक भारतीय नागरिकको पेटबाट ४० वटा चक्कु झिकियो
एजेन्सी– एक भारतीय नागरिकको पेटबाट चिकित्सकले ४० वटा चक्कु निकालेको छ । ती ४२ वर्षीय भारतीय नागरिकले तीन महिनाको बिचमा ४० वटा चक्कु निलेका थिए । उनले गत सातामात्रै पेटको दुखाईका कारण आफूसँगको सम्पर्कमा आएको डा.जतिन्दर मलहोत्राले जनाएका छन् । उनको पेटबाट सबै चक्कु निकालिएको र अवस्था खतरामुक्त रहेको मल्होत्राको भनाई छ । पाँच जना […]
Posted in: International News, RochakLeaveacomment
यहाँका महिलाहरू ६५ वर्षको उमेरमा पनि जवान देखिन्छन्(फोटो र भिडियो सहित)
उत्तरी पकिस्तानमा अवस्थित करकोरम पहाडको हुंजा घाटी भन्ने चर्चित ठाँउमा अफ्नो जिन्दगी खुशीसँग विताइरहेका हुंजा प्रजातिका मानिस औसतन १२० वर्षसम्म वाँच्छन् । यती मात्र होइन की यहाँका महिलाहरू ६५ वर्षको उमेरमा पनि जवान देखिन्छन् र यो उमेरसम्म पनि वच्चा जन्माउँछन । यिनीहरूको संख्या लगभग 87 हज़ार छ । यिनीहरूको प्राय विना कुनै विमारी मृत्यू हुन्छ, केही […]
Posted in: International, Photo Feature, Rochak, TourismLeaveacomment
रोम–सिराकस युद्ध र प्रविधिको विकास
कहाँको काठको गुर्ता र कहाँको रकेट लञ्चर ? अहिलेको रकेट लञ्चरको पूर्खा काठको गुर्ता नै थियो भन्ने सुन्दा हामीलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । तर यो कुरा सत्य हो । विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम् विकास भएको आजको जमानामा जेजति कुराहरु मानव समाजको सपत्तिको रुपमा आर्जित छन्, ती सबै प्राकृतिक प्रदत्त साधनस्रोतबाट निर्माण भएका हुन् । पहिले […]
Posted in: Feature News, International News, RochakLeaveacomment